Fantastical 2 ho an'ny iPhone sy iPad dia mahazo fampandrenesana be loatra sy sticker amin'ny Messages | Vaovao IPhone
Fantastical 2 dia nanjary mendrika ny iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra azontsika jerena ao amin'ny App Store hitantanana ny kalandrie misy antsika, miaraka amin'ny Calendars 5. Raha mpampiasa mavitrika amin'ny kalandrie ianao dia azo inoana fa mihoatra ny indray mandeha hitanao ny fomba tsy ahitan'ny fampiharana iOS zanatany safidy fohy, fampiharana tena tsara izay nihatsara be tato anatin'ny taona vitsivitsy, saingy mety ho tsara kokoa izany. Fantastical 2 dia nahazo fanavaozam-baovao vaovao na amin'ny kinova ho an'ny iPhone na amin'ny kinova ho an'ny iPad, amidy misaraka amin'ny vidiny samy hafa izy ireo, fanavaozana izay manome anay fanohanana amin'ny fampandrenesana manan-karena ankoatra ny fanomezana fonosana sticker iray ho an'ny rindranasan'ny Messages.
Fantastical 2 dia mifanaraka amin'ny Apple Watch, Ka noho izany dia ho eny an-tanantsika foana ny fotoana voatondro amin'ny kalandrie, ny fotoana voatondro ahafahantsika manemotra, manova na mampihemotra tsy misy olana. Raha mbola manana fisalasalana amin'ny kalitao natolotr'ity fampiharana ity ianao dia tokony ho tadidinao fa ny salan'isan'ny Fantatical 2 ao amin'ny App Store dia 4,5 kintana amin'ny 5, mifototra amin'ny fanombanana 265, zavatra iray tena sarotra tratrarina miaraka amin'ny maro hevitra.
Inona no vaovao amin'ny Fantastical 2.8 kinova 2
Noho ireo fiasa izay tsy misy ao amin'ny iOS 10 fotsiny, ny fampiharana dia mila ny kinova farany an'ny iOS mba hametrahana sy hiasa amin'ny fitaovana.
Misaotra ireo stickers vaovao an'ny fampiharana, hahafahanay maneho hevitra amin'ny fomba hafa.
Ny fampandrenesana manankarena vaovao dia ahafahantsika mahita antsipiriany bebe kokoa momba ny fampahatsiahivana sy ny hetsika.
Fanohanana nohatsaraina ho an'ny Dynamic Type (iPad ihany)
Fanehoan-kevitra haptic vaovao amin'ny iPhone 7 sy iPhone 7 Plus.
Ny fahamendrehana sy ny fahamarinan-toerana fampiharana ho an'ny Apple Watch dia nohatsaraina.
Ny fampiasana localisation dia novaina, lasa tsy ampiasaina raha tsy rehefa mampiasa ilay application isika fa tsy foana.
Namboarina bibikely izay nahafahanay nampiasa kitendry antoko fahatelo. +
Fantastical - Kalandrie sy lahasamaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Fantastical 2 ho an'ny iPhone sy iPad dia mahazo fampandrenesana manan-danja sy sticker amin'ny Messages
Huawei dia nanao sonia an'i Justing Long, mpisehatra amin'ny fampielezan-kevitra "Get a Mac" ho an'ny doka